IMicrosoft yethula i-Office 2016 ye-Mac | Ngivela kwa-mac
IMicrosoft ikhipha iHhovisi 2016 leMac
Kufakiwe | | Izaziso, Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac
Ngemuva kwesikhathi sezinguqulo ze-beta ezaqala ngoMashi owedlule, abakwaMicrosoft izolo bamemezele ukwethulwa ngokusemthethweni kwe IHhovisi 2016 leMac, isoftware yakho yehhovisi lesizukulwane esilandelayo eyenzelwe abasebenzisi be-apula elilonyiwe. Isoftware entsha I-Office 2016 Isibuyekezo sokuqala esikhulu seMac kusukela ngeHhovisi lika-2011, futhi siletha izinhlobo ezintsha ze-Word, Excel, ne-PowerPoint ngesibonisi esakhiwe kabusha esenzelwe ukuboniswa kwe-Retina, izici ezintsha, nokugxila emsebenzini wokusebenzisana nokuhlanganiswa kwamafu.
I-Office 2016 ye-Mac isiyatholakala
«Uma usuvele usebenzisa Office kwi-PC noma ku-iPad, uzozithola usekhaya ku- IHhovisi 2016 leMac. Isebenza njengoba kulindelwe, ngesixhumi esibonakalayo seRibbon ejwayelekile nama-panes womsebenzi anamandla. Abasebenzisi be-Mac bazokwazisa isipiliyoni seHhovisi sesimanje nokuhlanganiswa kwamakhono we-Mac njengokubukwa kwe-Full Screen nezenzo zomzimba ze-Multi-Touch. Ngokuxhaswa okugcwele kweRetina, imibhalo yeHhovisi ibukeka icijile futhi iphila kakhulu kunakuqala. »
Ihhovisi leMac 2016 yamukele izinto eziningi esezivele zibonwe ngaphambili enguqulweni ye-Office for Windows nasekusetshenzisweni kwe- Office Hambayo okufana "neribhoni" yamathuluzi wokuhlela nezinketho zokufomatha, kanye nefasitelana lomsebenzi lokwenza imidwebo ngokwezifiso ezinhlelweni ezintathu ze-Office, kanye nezindikimba nezitayela ezintsha.
Ihhovisi leMac 2016 yethula idizayini entsha ngokwesitayela se-OS X Yosemite esisebenzisa ngokunenzuzo izici ezifana nokusekelwa kwesikrini esigcwele, ukukhonjiswa kweRetina nokuthinta okuthinta okuningi, ngenkathi ngokuhlanganiswa efwini sizoba nawo wonke amafayela e-Microsoft atholakalayo ezinhlobonhlobo amadivayisi.
IZwi 2016 le-Mac kufaka ithebhu entsha Yedizayini evumela ukwenziwa ngokwezifiso kwemibala, amafonti, njll ngokushesha ngenkathi kusetshenzwa umbhalo. Ukwabelana nakho kuthuthukisiwe kuvumela abasebenzisi abaningi ukuthi basebenze kudokhumenti efanayo ngasikhathi sinye ngenkathi bangafaka imibono ukuze baxhumane.
I-Excel 2016, ku-Preview for Mac, iphakamisa amashadi alingana kahle nokusethwe kwedatha ngenkathi ithuthukisa ukuhlaziywa kwedatha ekuvumela ukuthi uhlaziye inani elikhulu lamaphethini. Futhi izinqamuleli ngaphakathi kwe-Excel nezinye izinhlelo zokusebenza ze I-Office 2016 zivuselelwe ukufanisa ozakwabo beWindows, ukuqedwa kokuzenzakalela kuthuthukisiwe, futhi ukuhlanganiswa kwedatha kwenziwe kwaba lula ukudala amaspredishithi amasha.
I-PowerPoint 2016 ye-Mac kufaka phakathi ukubuka okuthuthukisiwe kwePrezentheshini okukhombisa isilayidi samanje, isilayidi esilandelayo, amanothi esikhulumi, kanye nesibali sikhathi, kanye ne- I-PowerPoint ye-iOS. Ngaphezulu kwesokunxele, isipikha sizokwazi ukubona kahle ukuthi izethameli zesethulo zibonani, kufaka phakathi ukugqwayiza ngesikhathi sangempela, ukuze zithole umbono ongcono wokuthi isethulo sithuthuka kanjani. Kukhona nephaneli entsha yokuklama nokulungisa ukugqwayiza, kanye nokushintshwa kwesilayidi okusha.
I-Outlook yeMac yethulwa ngo-Okthoba wonyaka odlule futhi yakhelwe nokusebenza nezinhlelo ezintsha ze- I-Office 2016, ngokusekelwa kwezaziso zohlelo lokusebenza, ukubuka ingxoxo okuthuthukile nokubukwa kuqala kwemilayezo. I-OneNote ye-Mac yanyatheliswa ngoMashi 2014.
I-Outlook 2016 ye-Mac
Ngokusho kweMicrosoft, ezinye zezinguquko ezibaluleke kakhulu ezenziwe kuzo IHhovisi 2016 leMac bebephendula imibono evela ku- abasebenzisi abazame izinhlobo ze-beta. IMicrosoft ihlela ukukhipha izibuyekezo zesoftware okungenani kanye ngekota.
IHhovisi 2016 leMac iyatholakala kubo bonke abasebenzisi ababhalisele i-Office 365 kusukela izolo. Uhlobo lwesikhathi esisodwa, olungenakubhaliswa luzokhishwa ngoSepthemba.
UMTHOMBO | MacRumors
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » IMicrosoft ikhipha iHhovisi 2016 leMac
USerif wethula 'i-Affinity Photo' uhlelo lobuchwepheshe lokuthwebula izithombe lweMac
Ungawalanda kanjani ama-betas asesidlangalaleni asevele etholakalela i-OS X El Capitan ne-iOS 9